China Mugadziri we carbon steel shaft sleeve uye general mechanical accessories Stainless simbi inobereka bush fekitori nevagadziri |Jute
Bushing chikamu chinotsigira chinoshandiswa kunze kwemakanika zvikamu kuita mabasa ekuisa chisimbiso nekudzivirira kupfeka.Rinoreva sleeve yemhete ichiita segasket.Muzvikamu zvinofamba, zvikamu zvakapfekwa nekuda kwekukakavadzana kwenguva refu.Kana kubviswa pakati pe shaft negomba kunopfekwa kune imwe nhanho, zvikamu zvinofanira kuchinjwa.Naizvozvo, mugadziri anosarudza zvigadzirwa zvine kuomarara kwakaderera uye kwakanaka kupfeka kuramba seshaft sleeve kana bushing mukugadzira, izvo zvinogona kuderedza kupera kweshaft uye chigaro.Kana iyo shaft sleeve kana bushing yakapfekwa kune imwe nhanho, inogona kutsiviwa, Nenzira iyi, mutengo wekutsiva shaft kana chigaro unogona kuponeswa.Kazhinji, bushing inotora kupindira kunoenderana nechigaro uye clearance inokodzera shaft, nekuti kupfeka hakugone kudzivirirwa zvakadaro, izvo zvinogona kungorebesa hupenyu hwesevhisi, uye shaft zvikamu zviri nyore kugadzirisa.
Yepamusoro Precision Yakagadzirwa Yakaomeswa Simbi Bushing
1) Simbi: Simbi isina simbi, Simbi (Iron,) Brass, Copper, Aluminium
3) OEM maererano nechikumbiro chako
Anodized akasiyana ruvara, Mini polishing&brushing,Electronplating(zinc plated,nickel plated,chrome plated),Simba coating&PVD
kukoira, Laser kumaka & Silk sikirini, Kudhinda, Welding, Harden etc.
CNC machining,Auto lathing/turning,Kugaya,Grindin,Tapping Drilling,Bending,Casting,Laser kucheka
Kazhinji 3-7 mazuva ekushanda emuenzaniso uye 12-15 mazuva ekushanda ekugadzira batch
T/T,Kubhadhara kwebhangi pamhepo,Visa,Paypal
Kambani yedu inyanzvi mukugadzira zvakasiyana-siyana zvesimbi isina musono pombi uye chaiyo simbi pombi.Kuburikidza nekugadzirisa kwakadzama kwepombi yesimbi isina musono, shaft maoko, bushings uye akasarudzika-akaumbwa maworkpiece eakasiyana siyana uye saizi anogona kugadzirwa.Chigadzirwa chacho chinogona kugadzirwa uye kumwe kurapwa kwepamusoro.Sezvo isu takanyatso kugadzirwa nefekitari, tine zvakanakira zviri pachena mumhando yechigadzirwa uye mutengo.
Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa zvakanaka munyika dzinopfuura makumi maviri pasirese uye kuhwina mukurumbira wakanaka munyika idzi.
Kugadziriswa kwemitemo yekuongorora sleeve ye shaft
1. Chitarisiko chemhando yemuenzaniso wepasi ichave isina mabubbles, burrs uye deformation, uye zvinhu zvichave zvakafanana uye zvisina kunhuhwirira.
(1) Shandisa vernier caliper kuti uedze zviyero zvakakodzera, izvo zvinoenderana nezvakakodzera zvehunyanzvi uye zvekudhirowa zvinodiwa.
(2) Mushure mekunge sleeve ye shaft yafananidzwa neshaft inotenderera, rotor inodzika yakadzika pasi, uye sleeve ye shaft haizotsvedza zvakasununguka pasi pekuita kwekurema.
3. Kupisa uye kuchembera kuramba bvunzo
(1) Mushure mekunge sampu yaiswa pasi pe125 ℃ / 1H bhora rekumanikidza bvunzo, iyo indentation ichave ≤ 2mm, uye hapazove nekushanduka nekutarisa kwekuona.
(2) Mushure mekuisa sampu muchoto pa120 ℃ / 96 maawa, tarisa nemeso kuti shaft sleeve haina kubvongodzwa uye deformation.
4. Muedzo wekudzivirira moto
Iyo giredhi inodzosa moto ndeye VW-1.Kana uchipisa nemwenje wedoro ye15s, ichadzimwa mukati me15s.
5. Kurongedza nekumaka
(1) Iyo yekurongedza ichave yakasimba, yakavimbika uye yakachengeteka kuve nechokwadi chekuti zvigadzirwa hazvikanganiswe panguva yekufambisa.
(2) Iyo pasuru ichaiswa chiratidzo chemupi wekodhi uye zita, zita rechigadzirwa, huwandu hwechigadzirwa, kodhi yezvinhu, mhando yekuongorora chiratidzo, zuva rekugadzira, nezvimwe. chiratidzo chichave chakajeka uye chakarurama pasina kusanganiswa kurodha.
(3) Kuti uwedzere kuteedzera kwezvigadzirwa, zvinodikanwa kumaka nhamba yekugadzira batch panzvimbo inobata ziso yepakeji yekunze.Iyo yekugovera batch nhamba icharatidzwa pane chigadzirwa chekuongorora chitupa kana rekodhi rekodhi rekuongorora (Kuedza).
6. Hazardous substance content (RoHS directive)
Kana yakashandiswa kune RoHS dhiraivha modhi, zvinhu zvacho zvinosangana nezvinodiwa zveRoHS rairo.
Zvakapfuura: Kupatsanurwa kwepombi dzesimbi dzakagadzirwa nechaiyo seamless simbi mapaipi vanogadzira
Zvinotevera: Sleeve yekusimbisa